भारतको एउटा यस्तो राज्य जसमा भारतीयले नै भिसा नलिई जान नपाउने । – Yuwa Aawaj
बैसाख १३, २०७८ सोमबार 767
एजेन्सी : भारतमा एउटा यस्तो राज्य छ जहाँ भारतीय नागरिक नै भिसा नलिइ प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । भारतीय नागरिकहरुले आफ्नै देशको जमिनमा जान पनि भिसा
लिनुपर्ने आवश्यकता छ । भारतीय राज्य नागाल्याण्डमा परमिटविना कोही भारतीयले प्रवेश पाउँदैनन् । भारतमा यस्तो नियम छ जहाँ आफ्नै मुलुकको राज्य नागाल्याण्डमा जानका लागि भारतीयले पनि इनर लाइन परमिट लिनुपर्ने हुन्छ ।
सो राज्यमा जान भारतीयले इनर लाइन प’रमिट लिनुपर्छ । परमिट बिना भारतीयलाई नै प्रवेश नि’शेष छ । नागाल्याण्डका स्थानीय निवासीलाई मात्र यहाँ विना अनुमति घुम्ने अधिकार छ । आफ्नै मुलुक भित्रका अन्य राज्यका नागरिकले भने इनर लाइन परमिट लिनुपर्छ ।
इनर लाइन परमिट एक प्रकारको आ’न्तरिक भिषा हो । यस्तै नियम यस अघि जम्मू कश्मीरमा पनि लागू थियो । तर, भारतीय जनता पार्टीको माउ दल जनसंघका नेता श्यामाप्रसाद मुखर्जीको आन्दोलन पश्चात यो नियम हटेको थियो ।
अब नागाल्याण्डमा पनि यो ब्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग उठेको छ । राष्ट्रिय स्तरमा त्यसवारे बहस समेत भइरहेको छ ।
हालै बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय यो विषयलाई लिएर सुप्रिम कोर्ट पुगेका छन् । लोकसभामा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ ।
भारतमा नागाल्याण्डमा मात्र इनर लाइन परमिटको व्यवस्था लागू छ । बंगाल इस्टर्न फ्रं’टियर रेग्यु’लेशन, १८७३ अनुसार यो व्यवस्था गरिएको हो । यहाँ संरक्षित र प्रतिबन्धित क्षेत्रमा जान यस्तो इजाजत लिनुपर्छ । नागाल्याण्डलाई यसै क्षेत्र अन्तरर्गत राखिएको छ ।
भारतमा ब्रिटिश सरकारको समयमा यो इनर लाइन परमिटको व्यवस्था लागू गरिएको थियो । जुनबेला नागाल्याण्डमा विभिन्न बहुमूल्य जडिबुटी तथा औष’धिको प्र’चुर मात्रा थियो ।
जुन औषधि बेलायत पठाउने गरिन्थ्यो । उक्त औषधिमा अरु कसैको पहुँच नहोस भन्नका लागि बेलायत सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । तर भारत स्व’तन्त्र भएपछि पनि यो ब्यवस्था खा’रेज गरिएको छैन । -ताजा खबर
Prevआमाको अगाडि छोरी छट्प’टाउँदै म’र्दा कति द’र्द भयो होला ?
Nextविदेश जानेहरुको पिसिआर परीक्षण गर्न तोकियो अस्पतालहरु, हेर्नुहोस् ।(सूचिसहित)
बधाई ! प्रहरी सहायक निरीक्षक अनिता चौधरी एक नम्बर प्रदेश प्रहरी तामिल केन्द्रको उत्कृष्ट प्रहरी घोषित ।